Zụta Monetized YouTube Channel | Monetized Youtube Channel Maka ire ere - AudienceGain Ltd
Uru nke ịzụrụ ọwa ego
Nkwa maka okwu ndị mmụọ ọjọọ metụtara vidiyo izizi mgbe ịzụrụ
n'ihi na "Akwụsịla" Ọwa Ego Ego: Ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'ahịa anaghị enye akwụkwọ ikike maka ọrụ ọwa YouTube eburula ụzọ zụrụ. Mana, anyị na -ekwe nkwa na ọwa ahụ ga -adị mma maka ụbọchị atọ ka ịzụrụ ya, yabụ ị nwere oge ịlele ọwa, gbanwee ozi dị mkpa ma chekwaa akaụntụ gị.
n'ihi na “Okenye tozuru etozu” Ọwa ego, wna -ekwe nkwa 100% agaghị enwe ihe ize ndụ ọ bụla nke ime mmụọ mmụọ nke vidiyo mbụ anyị kpatara. Ọzọkwa, anyị na -ekwe nkwa nkwụghachi ozugbo ma ọ bụrụ na ọwa mma adịghị ka akọwara ya.
Note: Ọnọdụ bụ na ị gaghị ebugo vidiyo ọ bụla.
Na 1000-3000 ezigbo ndị debanyere aha ga-ewetara gị mmalite ngwa ngwa.
Site na ezigbo ndị debanyere aha 1000-3000 bụ ndị na-etinye aka na ọwa ahụ, ọ ga-ewetara gị mmalite ngwa ngwa karịa ịmepụta ọwa site na ọkọ.
Cheta na: Agụnyere atụmatụ a naanị na ọwa ndị tolitere n'ụzọ anụ ahụ.
Nnyefe ngwa ngwa site n'aka ndị otu nkwado anyị raara onwe ha nye.
Dịka, anyị na-ebunye ọwa Monetized n'ime awa 1-12.
Maka ịdị mma gị, anyị ga -eduzi gị site na obere usoro dịka nbanye akaụntụ, nchekwa akaụntụ, ma ọ bụ ọbụna gbanwee na akaụntụ Google Adsense echekwara ka ebugharịchara ọwa ahụ nke ọma. Ya mere zuru ike. Anyị ga -enyere gị aka ijikwa ọwa gị nke ọma.
Gbaa mbọ hụ na ị nwetara ndụmọdụ n'aka ndị otu ọkachamara anyị ka ịhọrọ ụdị ọwa dabara adaba maka mkpa gị.
Maka ịdị n'otu, biko gbaa mbọ hụ na ị gụọ wee kwenye na Usoro Ọrụ anyị tupu ịzụrụ ihe.
Gini Ka Osimiri Na-eme Ego Na-adị?
Na -ekwe nkwa maka nsogbu mmụọ mgbe ịzụrụ
Ọwa nke toro eto na ọwara mmiri. Onye ọrụ ọ bụla dabara maka ya?
Ọwa nke toro eto:
Ụdị ọwa a bụ naanị onye okike ọdịnaya 1 nwere ọdịnaya nwere ogo dị elu. Anyị na -akwado na ọwa a ga -enwe mmụba na -aga n'ihu na echiche na ndị debanyere aha. Yabụ, enweghị ihe egwu dị na ya n'ihi vidiyo mbụ. Enwere amụma nkwụghachi maka ọwa a toro eto.
→ Ole ndị adabara maka ọrụ a: ndị mmadụ chọrọ ịzụlite ọwa ahụ ogologo oge site na imepụta vidiyo mbụ ha.
Enwere ụfọdụ ihe ize ndụ nke ime mmụọ mmụọ n'ihi na anyị na -ejikarị ndị nrụpụta ọdịnaya ole na ole mepụta vidiyo (gụnyere ihu ha) maka ọtụtụ ọwa “nwere nsogbu”. N'ihi nke a, YouTube ka nwere ike chee na ọwa ndị ahụ ejirila vidiyo ndị ọzọ mee ihe ọzọ.
Ndị dabara maka ọrụ a: ndị mmadụ na -eji ọtụtụ ọwa enweta ego n'ime obere oge iji nweta ego site na ijigharị vidiyo ndị ọzọ.
Kedu ka nkwụghachi iwu si arụ ọrụ?
Ọ ga -abụ mmụọ ọjọọ YouTube mgbe m zụrụ ya?
Ịzụta ọwa ime ego nwere ihe egwu dị na ya. Dị ka ị maara, YouTube siri ike karịa ikwe ka ọwa ọhụrụ nweta ego na ikpo okwu ha. Ha ka ga -anọgidesie ike ọbụlagodi mgbe akwadoro ọwa ahụ maka ịkpa ego. Ọwa a ga -eme mmụọ mmụọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha achọpụta mmebi ọ bụla na vidiyo ndị ahụ. N'ikwu eziokwu, ọwa a na -emefu ego dabara adaba maka ndị YouTubers ochie maarala usoro itinye ego nke YouTube n'ihi na ha nwere ike zere ihe egwu na -adịghị mma.
Agbanyeghị, ọ pụtaghị na a gaghị enwe ohere maka YouTubers ọhụrụ. Nwee obi ike ma ọ bụrụ na ị dị oke mkpa ma chọọ ịkpata ego na YouTube. Ị nwere ike mụta iwu ahụ nke ọma wee rube isi na ya dịka ndị YouTubers ndị ọzọ na -eme. Ihe niile ga -adị mma.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na mmụọ ọjọọ na -eme YouTube tupu m bulite vidiyo?
Maka ọwa "Botted": Companieslọ ọrụ ndị ọzọ dị n'ahịa anaghị enye akwụkwọ ikike maka ọrụ ọwa YouTube Monetized mgbe azụrụ ya. Mana, anyị na -ekwe nkwa na ọwa ahụ ga -adị mma maka ụbọchị atọ ka ịzụrụ ya, yabụ ị nwere oge ịlele ọwa, gbanwee ozi dị mkpa ma chekwaa akaụntụ gị. Mgbe oge ahụ gachara, anyị agaghị aza ajụjụ maka ihe ọ bụla na -eme ọwa YouTube gị, gụnyere ọwa a na -eme mmụọ mmụọ, nwere nkwarụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ọnọdụ bụ na ị gaghị ebugo vidiyo ọ bụla.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọwa na -adị nchebe, mana ọ na -eme otu oge n'otu oge. A na -eme nzụta niile nke Ọrụ n'ihe ize ndụ gị. N'ihi nke a, anyị enweghị ike ịkwụghachi mgbe emechara ọrụ ma ọ bụrụ na nke a mere na akaụntụ/ọdịnaya.
Maka ọwa “Ego-toro eto” Ọwa Ego Ego, anyị na -ekwe nkwa 100% agaghị enwe ihe ize ndụ ọ bụla nke ime mmụọ mmụọ nke vidiyo mbụ anyị kpatara. Ọnọdụ bụ na ị gaghị ebugo vidiyo ọ bụla. Ọzọkwa, anyị na -ekwe nkwa nkwụghachi ozugbo ma ọ bụrụ na ọwa mma adịghị ka akọwara ya.
Na ịzụrụ akaụntụ m, ị kwenyere na usoro na ọnọdụ ọrụ m, daalụ!
Ogologo oge ole ka egosiri ọwa a?
Naanị anyị na -ere ọwa YouTube sonyere YPP ihe dị ka otu ọnwa. Yabụ, nkwụsi ike ya dị oke elu.
Ndị a bụ usoro ịnata ọwa ahụ?
Kwụpụ 1: Anyị ga-ezitere gị ozi zuru ezu nke Channel Monetized nke gụnyere Email, Okwuntughe, Iweghachite Email, tinyezie adreesị Gmail gị dị ka onye nwe ọwa n'ime awa ole na ole.
Kwụpụ 2: Anyị ga-ejikọ gị site na Live Live ma duzie gị nzọụkwụ site na ịme nchekwa ọwa. Have ga-agbaso ntuziaka anyị mgbe ị na-abanye na Channel Monetized na adreesị IP ọhụrụ maka ihe nchekwa.
Kwụpụ 3: Mgbe emechara ihe niile & afọ juru gị na ọwa ahụ, nke ahụ pụtara na anyị emechara usoro gị.
Ọ dịghị ma ọlị! Gbanwe niche ahụ emetụtaghị ọnọdụ ego ọwa. Dị njikere na vidiyo gị na-agbaso iwu YouTube, anyị na-ekwe nkwa na.